घर > निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
यदि तपाइँ शाकाहारी निकोटीनामाइडको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ रिबोसाइड क्लोराइड पूरक, हामी Cofttek निकोटीनामाइड Riboside पूरक सिफारिस। निर्माण कम्पनीले केवल निकोटीनामाइड राइबोसाइड सप्लीमेन्टको साथ सौदा गर्छ र यसैले कुनै व्यक्ति विश्वस्त हुन सक्छ कि कम्पनीले बनाएको सप्लीमेन्ट एकदमै उच्च गुणवत्ताको छ। को Cofttek निकोटीनामाइड राइबोसाइड पूरक उपभोग गर्न सजिलो क्याप्सूलमा आउँदछ, जुन गाह्रो रूपमा सजीलो हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरू प्रति दिन केवल एक क्याप्सूल लिन आवश्यक छ।
जे होस्, यदि तपाइँ ग्लुटन, अण्डा, बीपीए, नट, संरक्षक र डेरी-मुक्त उत्पादनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाइँको पैसा कोफटेक निकोटीनामाइड रिबोसाइड पूरकमा राख्न सिफारिस गर्दछौं। यो पूरकले फ्लाभोनोइड्सको साथ NR लाई संयोजन गर्दछ। सँगै, यी दुई sirtuin गतिविधि वृद्धि। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कफटेकले दावी गर्दछ कि यसले यसको प्रत्येक पूरकमा चार चरणको टेस्ट गर्छ र यसैले कम्पनीका पूरकहरू पूरै सुरक्षित छन्। यसबाहेक, यी पूरकहरू सीजीएमपी प्रमाणित सुविधा र टीजीए प्रमाणित सुविधामा उत्पादन गर्दछन्
हामीलाई किन निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड चाहिन्छ
के नाड रिभर एजिंग?
एनएडी उपचारको लागि कति खर्च हुन्छ?
के नाद छाला सुधार गर्छ?
के नाद भिटामिन बी3हो?
के निकोटीनामाइड भिटामिन बी as जस्तै हो?
के म दैनिक नियासिनमाइड प्रयोग गर्न सक्छु?
के नियासिनमाइडले अनुहारको कपालको बृद्धि गर्दछ?
कुन राम्रो नियासिनमाइड वा भिटामिन सी हो?
के नियासिन तपाईंको कलेजोको लागि खराब छ?
के निकोोटिनमाइड छालाका लागि राम्रो छ?
१०% नियासिनमाइड धेरै छ?
निकोट्टिनमाइडले चाँडो कसरी काम गर्दछ?
के नियासिनमाइडले एक्ने दाग हटाउँछ?
भिटामिन B5 ले तपाईंको छालाको लागि के गर्छ?
म कसरी स्वाभाविक रूपमा मेरो NAD बढाउन सक्दछु?
के तपाइँ मौखिक रूपमा NAD लिन सक्नुहुन्छ?
काम गर्न nad ले कति समय लिन्छ?
Elysium सुरक्षित छ?
NAD एन्टी एजिंग के हो?
निकोटीनामाइड राइबोसाइडका साइड इफेक्टहरू के हुन्?
के निकोटीनामाइड Nmn जस्तै हो?
के नादले निद्रामा मद्दत गर्दछ?
Tru Niagen शरीरको लागि के गर्छ?
कुन Nmn वा NAD राम्रो छ?
के नाद पूरकहरु काम गर्छन्?
नाद IV चिकित्सामा के हुन्छ?
एनएडी बूस्टरहरू के हुन्?
NADH र NAD + को बीच के भिन्नता छ?
कुन खाद्य पदार्थमा निकोटीनामाइड राइबोसाइड हुन्छ?
निकोटिनमाइडमा कुन खाद्य पदार्थहरू उच्च हुन्छन्?
Niacin कलेजो को लागि खराब छ?
निकोटीनामाइड छालाको लागि के गर्छ?
के नियासिन डिप्रेसनको लागि राम्रो छ?
भिटामिन बी defic को अभावका लक्षणहरू के के हुन्?
के व्यायाम NAD वृद्धि गर्दछ?
निकोटीनामाइड भिटामिन बी हो?
के नियासिनले NAD + स्तर बढाउँछ?
तपाइँ कसरी NAD + लिनुहुन्छ?
S sirtuins के हो?
म कसरी मेरो sirtuins बढावा गर्न सक्छन्?
मैले कहिले Niagen लिनु पर्छ?
TRU Niagen लाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
दिनको कति समय मैले Tru Niagen लिनु पर्छ?
Tru Niagen मा के सामग्रीहरू छन्?
नियासिनमाइडका साइड इफेक्टहरू के हुन्?
तपाईं नियासिनामेडसँग के गर्न सक्नुहुन्न?
के तपाई अनुहारमा धेरै नियासिनमाइड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
के 1000 मिलीग्राम नियासिनमाइड सुरक्षित छ?
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड खुराक
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड लाभ
कहाँ थोक मा निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर खरीद गर्ने?
निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड वा निआगेन निकोटिनमाइड रिबोसाइडको क्रिस्टल रूप हो, जुन NAD + अग्रगामी भिटामिन हो। जबकि निकोटीनामाइड रिबोसाइडको वजन २255.25.२290.70 ग्राम / मोल हुन्छ, निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइडको वजन २ 100 ०.88० ग्राम / मोल र १०० मिलीग्राम निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड XNUMX XNUMX मिलीग्राम निकोटीनामाइड रिबोसाइड प्रदान गर्दछ। NR लाई खानाको रूपमा प्रयोग गर्न सुरक्षित मानिन्छ।
हुनत निकोटीनामाइड रिबोसाइड भिटामिन बी of को रूप हो, यसका विभिन्न गुणहरूले यसलाई भिटामिन बी group समूहका अन्य सदस्यहरू भन्दा निकै फरक पार्छ, जस्तै निकोटीनामाइड र नियासिन। जबकि नियासिनले जीपीआर १०० ए जी-प्रोटीन युग्मित रिसेप्टरलाई सक्रिय गरी छालालाई फ्लश गराउँछ, निकोटीनामाइड रिबोसाइडले यो रिसेप्टरको साथ सबै प्रतिक्रिया देखाउँदैन र त्यसकारण, छाला फ्लशिंग पनि गर्दैन, प्रति दिन २००० मिलीग्राम उच्च खुराकको मात्रामा खपत भए पनि। यसबाहेक, चूहोंमा गरिएको प्रयोगले पत्ता लगायो कि निकोटीनामाइड रिबोसाइड एनएडी + अग्रगामी हो जसले निकोटिनमाइड एडेनिन डिन्युक्लियोटाइड वा एनएडी + शरीरमा उच्च स्पाइकको नेतृत्व गर्‍यो।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड स्वाभाविक रूपले मानव आहारमा देखा पर्दछ र एक पटक शरीर भित्र, यो NAD + मा परिवर्तन हुन्छ, जसलाई शरीरलाई विभिन्न प्रकारका कार्यहरूको आवश्यक पर्दछ। उदाहरणका लागि, वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गर्यो कि एनआर द्वारा प्रदान गरिएको निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड वा एनएडी + माइटोकोन्ड्रियल कार्यको साथसाथै इन्सुलिन संवेदनशीलतालाई सुधार गर्दछ एन्जाइमको सिर्टुइन परिवारलाई सक्रिय बनाएर, जुन शरीरमा अक्सिडेटिव मेटाबोलिज्मको नियमनको लागि जिम्मेदार छ।
सौन्दर्य प्रसाधन उद्योग एक अरबौं डलरको उद्योग हो, मुख्यतया किनभने मानिसहरु आफ्नो तरीकाले हेरिरहेका छन्। यो पनि मुख्य कारक हो किन बुढेसकाल विरोधी सामग्री र उत्पादन वरिपरि अनुसन्धान यति छोटो समयमा यस्तो अविश्वसनीय प्रगति गरेको छ। ग्लोबल समूहहरूले बुझ्छन् कि व्यक्तिहरूको सदाको लागि जवान रहनको चाहनाबाट पैसा कमाउनुपर्दछ र यसैले टिमहरू हुन्छन् जसले छालाको जीवनशैली बढाउन सक्ने सामग्री र उत्पादनहरू फेला पार्न दिन र हप्ताहरू खर्च गर्दछन्। निकोटीनामाइड रिबोसाइड वा Niagen एन्टी-एजिंग उत्पादनहरूका लागि यस अप्रत्याशित खोजको परिणामको रूपमा पत्ता लागेको थियो। धेरै जसो एन्टी-एजिंग उत्पादनहरूले छालाबाट बुढेसकालका लक्षणहरूलाई कम गर्दछ, नाइजेनले शरीर भित्र बुढेसकालको सim्केतलाई कम गर्दछ। निकोटीनामाइड रिबोसाइड वा निआगेन निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइडको क्रिस्टल रूप हो र एक पटक शरीरमा भित्र पसेपछि यो एनएडी + मा परिणत हुन्छ जुन स्वस्थ उमेरका साथै अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरूका लागि जिम्मेवार हुन्छ।
हालसम्म गरिएको अध्ययनले निकोटिनमाइड रिबोसाइड खपत १०० देखि २००० मिलीग्राम प्रति दिनको मानव उपभोगका लागि सुरक्षित पाएको छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा अझ ठोस अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ, निकोटीनामाइड राइबोसाइड उत्पादकहरूले दैनिक एनआरको दैनिक सेवन २ 1000०--2000० मिलीग्राम प्रति दिन राख्न सिफारिस गर्छन्।
यद्यपि निकोटीनामाइड रिबोसाइड वा निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड उपभोग सुरक्षित छ, यसले बान्ता, टाउको दुख्ने, अपच, थकान र पखाला जस्ता साइड-इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईं एनआर पूरक लिने क्रममा यी लक्षणहरू मध्ये कुनै पनि अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तुरुन्तै तपाईंको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्। यसबाहेक, गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूमा निकोटीनामाइड रिबोसाइडको प्रभावको बारेमा पर्याप्त प्रमाण नभएकोले यस समूहले निकोटीनामाइड रिबोसाइड पूरकको प्रयोगबाट टाढा हुनु पर्छ।
तर भर्खरका अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि शरीरमा बढ्दो NAD + ले शरीरको सेलुलर प्रकार्यलाई पुनः फर्काउन सक्छ जुन पछाडि फर्कन्छ - वास्तवमा बुढेसकालको प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँदै। अनिवार्य रूपमा, पुरुषहरू NAD + को स्वस्थ स्तरहरू पुनर्स्थापना गरेर बुढ्यौलीलाई उल्ट्याउन सक्छ।
NAD ले कति खर्च गर्छ? NAD + infusions $ 749 999 at मा सुरू हुन्छ र MIVM ककटेलबाट सामग्री समावेश गर्न अनुकूलित गर्न सकिन्छ। मोबाइल IV मेडिक्स एनएडी + एमआईवीएम ककटेल $ XNUMX XNUMX is हो र यस लक्जरी उपचारमा थप भिटामिन र पोषकहरू समावेश छन्: म्याग्नीशियम।
एक सी एन्ड टी पत्रिका सल्लाहकार सहमत छन्: "सेल्युलर मेटाबोलिज्ममा एनएडी + महत्त्वपूर्ण छ, र यसले छालाको कोशिका उर्जा बढाउने विधिको रूपमा कस्मेटिक उद्योगमा आफ्नो बाटो खोजिरहेको छ। विचार यो छ, यदि तपाईं एक वृद्ध छाला कोषको छालाको उर्जा बढाउनुहुन्छ भने, यो तस्विर कोल सेलको रूपमा कार्य गर्दछ र उत्तम छाला उत्पादन गर्दछ।
उनले भने, "हाम्रो ल्याबले प्रदर्शन गर्यो कि १२ महिना भन्दा बढी चूहोंलाई NMN दिँदा उल्लेखनीय एन्टी-एजिंग प्रभावहरू देखिन्छ।" इमाईका अनुसार मानिसहरुमा नतिजा अनुवाद गर्दा एनएमएनले १० देखि २० बर्ष भन्दा कान्छो व्यक्तिको मेटाबोलिजम प्रदान गर्न सक्ने संकेत दिन्छ।
निकोटीनामाइड रिबोसाइड भनेको के हो? निकोटिनमाइड राइबोसाइड वा नाइजेन भिटामिन बी of को वैकल्पिक रूप हो, यसलाई नियासिन पनि भनिन्छ। भिटामिन बी of को अन्य रूपहरू जस्तै निकोोटिनमाइड राइबोसाइड तपाईंको शरीरले निकोटिनमाइड एडेनिन डायनुक्लियोटाइड (NAD +), कोएन्जाइम वा सहायक अणुमा रूपान्तरण गर्दछ।
नियासिन (भिटामिन बी as पनि भनिन्छ) पानीमा घुलनशील बी भिटामिन मध्ये एक हो। निकोसिन निकोटिनिक एसिड (पाइराइडिन 3-कार्बोक्सिलिक एसिड), निकोटिनमाइड (नियासिनमाइड वा पाइराइडिन 3-कारबॉक्समाइड), र सम्बन्धित डेरिभेटिभहरू, जस्तो कि निकोटीनामाइड राइबोसाइडको लागि जेनेरिक नाम हो।
जस्तो कि यो धेरै जसो मानिसहरूले राम्रोसँग सहने छन्, नियासिनमाइड दिनको दुई चोटी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो वर्षको कुनै पनि समयमा काम गर्दछ, जुन खास गरी जाडोमा चिसो, सुख्खा मौसम र केन्द्रीय तातो को बारम्बार प्रयोगको समयमा उपयोगी हुन्छ। तपाईंको retinol उपचार सुरू गर्नु अघि र यसको साथै यो पनि रन-अपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
लामो र कडा कपाल बढ्न Niacinamide को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका छ किनकि यसको सर्कुलेशन बूस्टिंग गुणहरू हुन्। यसले कपालको बाहिरी रूप र कोमलता बढाउँदछ, शरीर, कोमलता, शीन बढाएर। यसले केराटिनको संरचनालाई पनि सुधार गर्दछ जुन केराटिन निर्माण गर्न मद्दत गरेर शारीरिक / रासायनिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
यसका साथै, "सामान्यतया भन्ने हो भने, भिटामिन सी कम पीएचमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, प्रभावी हुनको लागि, नियासिनमाइड उच्च / तटस्थ पीएचमा राम्रो काम गर्दछ," रोमानोस्की थप्दछन्। (यसको फिक्स्ड प्रकृति नै किन धेरै भिटामिन सी उत्पादनहरू प्रिसिअर पक्षमा स्काउ हुन्छ; यो तयार पार्नको लागि यो कडा अवयव हो।)
नियासिनले हल्का-मध्यम-मध्यम सीरम एमिनोट्रान्सफेरेस एलिभेसन र उच्च खुराक र नियासिनको केहि योगनहरू क्लिनिक रूपमा स्पष्ट, गम्भीर लिवरमा चोट पुर्‍याएको छ जुन गम्भीर र घातक पनि हुन सक्छ।
Niacinamide सूजन कम गर्दछ, जो एक्जिमा, एक्ने, र अन्य भड्काउने छाला अवस्थाबाट लालिमा कम गर्न मद्दत गर्दछ। पोर उपस्थितिलाई न्यूनतम गर्दछ। छालालाई चिल्लो र मसिश्चराइज राख्दा दोस्रो फाइदा हुन सक्छ - समयको साथमा प्ोर साइजमा प्राकृतिक कटौती।
नाइसिनमाइडले घामको क्षतिको उपचार, ब्रेकआउट्स रोक्न, र राम्रो रेखा र झिम्का सुधार गरी तपाईंको छालाको बाहिरी रूप सुधार गर्न सक्छ। सामयिक नियासिनमाइड उत्पादनहरूको एकाग्रता १०% सम्म जान्छ, तर अध्ययनले २% भन्दा कमको साथ प्रभाव देखाएको छ।
यसले नियासिनामाइडलाई काम गर्न कति समय लगाउँछ? तपाईं तुरुन्त केही प्रभाव देख्नुहुनेछ, जबकि niacinamide मा धेरै जसो अध्ययनहरूले परिणाम देखायो 8-12 हप्ता पछि। %% नियासिनमाइड भएको उत्पादनहरू खोज्नुहोस्। कुनै प्रतिशत बिना कुनै जलन पैदा देखिने गरी फरक पार्ने प्रमाणित गरिएको त्यो प्रतिशत हो।
Niacinamide कोशिका भित्र melanosome गतिविधि स्थिर गर्न सक्छ, जो एक्ने दागहरु को साथमा melasma बाट पीडित को अवशिष्ट hyperpigmentation सुधार गर्न सक्दछ।
प्रो-भिटामिन B5 छाला नरम, चिल्लो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। यो पनि एक विरोधी भड़काउने प्रभाव छ कि तपाइँको छाला को उपचार प्रक्रिया उत्तेजित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। गहिराइ हाइड्रेटि ,ले, यसले छालालाई हावाबाट टाढा राख्दछ (चतुर!)
सीमित सूर्य जोखिम
उपवास र केटोसिस आहार
नतिजाको रूपमा, मौखिक NAD सप्लीमेन्टहरू IV इन्फ्युसनहरू भन्दा कम प्रभावकारी हुन्छन् किनकि तिनीहरूको कम शोषण दरको कारण। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि मौखिक पूरक पोषणहरू धेरै सुरक्षित हुन्छन्; तपाईलाई संक्रमण विकासको जोखिम छैन किनकि तपाई IV उपचारको साथ सक्नुहुन्छ।
आहार योजनाहरूले डोपामाइनलाई बढावा दिन भिटामिन युक्त खानाहरू समावेश गर्न सक्छ र मस्तिष्कमा NAD उत्पादन गर्न सक्दछ। प्रायः बिरामीहरूलाई प्रभावहरू महसुस गर्न लगभग to देखि १० दिन सम्मको आसव आवश्यक हुन्छ।
यो लामो अवधि को उपयोग को लागी सिफारिस गरीन्छ, सुझाव छ कि NAD बूस्टिंग गतिविधि मात्र कायम गर्न सकिन्छ यदि ग्राहकहरु लाई यस उत्पादन को उपयोग जारी राखे। Elysium स्वास्थ्य आधार। पूरकको रूपमा, आधार मानव उपभोगको लागि सुरक्षित मानिन्छ।
निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड (एनएडी +) सबै जीवित कोशिकाहरूमा आवश्यक कोफेक्टर हो जुन मौलिक जैविक प्रक्रियाहरूमा संलग्न छ। … उदीयमान प्रमाणले प्रभाव पार्छ कि NAD + स्तरको उचाइले ढिलो हुन सक्छ वा बुढेसकालको पक्षलाई उल्ट्याउन सक्छ र उमेरसँग सम्बन्धित रोगहरूको प्रगतिमा पनि ढिलाइ गर्दछ।
मानव अध्ययनमा, १,०००-२,००० मिलीग्राम प्रति दिन लिँदा कुनै हानिकारक प्रभावहरू भएन।
केही व्यक्तिहरूले हल्का देखि मध्यम साइड इफेक्टहरू रिपोर्ट गरेका छन्, जस्तै मतली, थकान, टाउको दुख्ने, पखाला, पेट असुविधा र अपच।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड र निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड बीच के भिन्नता छ? (२)
NMN र NR बीचको सब भन्दा ठूलो र सब भन्दा स्पष्ट आकार भिन्न छ। NMN NR भन्दा मात्र ठुलो हुन्छ, यसको मतलब सेलमा फिट हुनको लागि प्राय: यसलाई तोडिनु पर्छ। एनआर, जब अन्य एनएडी + पूर्ववर्तीहरू (निकोोटिनिक एसिड वा निकोटीनामाइड जस्तै) को तुलनामा दक्षतामा सर्वोच्च शासन गर्दछ।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड र NMN रासायनिक रूपमा समान छन् NMN मा उपस्थित एक फास्फेट समूहको अपवादको साथ। अध्ययनले देखाउँदछ कि यस अतिरिक्त फास्फेट समूहलाई पूरक एनएमएन पहिले निकोोटनामाइड राइबोसाइडमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ सेलमा प्रवेश गर्नु अघि।
एनएडी + स्तरको निद्रा जगाउने चक्र र उमेर-सम्बन्धित रोगहरूसँग एक कडा सम्बन्ध छ। कुनै प्रत्यक्ष प्रमाणहरू देखाईएको छैन कि NAD + ले निद्रा जगाउने चक्र र उमेर-सम्बन्धित रोगहरू बिच केन्द्रको रूपमा काम गर्दछ।
Tru Niagen के हो? Tro Niagen, ChromaDex द्वारा, एक स्वस्थ उर्जा उत्पादन हो जुन तपाइँलाई सेलुलर वृद्धि र मर्मत पुन: जीवन्त गरेर बुढेसकालको अवज्ञा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको NAD स्तर बढाउँदै गर्छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि एनएडी ले तपाईको शरीरलाई पोषक तत्व र खानालाई उर्जामा बदल्न, चयापचयलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
अध्ययनहरूले देखाए कि NAD + स्तर बढावाले खमीर, गँड्यौलाहरू र चूहोंमा जीवन अवधि बढाउन सक्छ। पशु अनुसन्धानले स्वास्थ्यको धेरै पक्ष सुधार गर्न NAD + को आश्वासन पनि संकेत गर्दछ। पुरानो चूहोंमा अणुको स्तर बढाउँदा मिटोकोन्ड्रिया पुन: सजीव देखिन्छ — कोषको उर्जा कारखानाहरू, जुन समयसँगै कमजोर हुन्छ।
एडिक्शन रिकभरीको क्षेत्रको सबैभन्दा नयाँ समग्र उपचार मध्ये एक एमिनो एसिड थेरापी हो, NAD IV थेरेपी। निकोटीनामाइड एडेनिन डिन्यूक्लियोटाइड (एनएडी) एक मेटाबोलिक को-एन्जाइम हो र शरीरको हरेक कोष संरचना, मर्मत र पुन: निर्माणको महत्त्वपूर्ण कामको लागि शुल्क लिइन्छ।
एनएडी बूस्टरहरू पूरकहरू हुन् जसले निकोटिनमाइड राइबोसाइड, भिटामिन बी of को एक प्रकार समावेश गर्दछ। जब पूरकको रूपमा लिईन्छ, शरीर निकोटीनामाइट राइबोसाइडलाई निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड (NAD +) मा रूपान्तरण गर्दछ। एनएडी + असंख्य कोशिका प्रक्रियाहरूमा संलग्न कोएन्जाइम हो। हामी उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रो शरीरमा NAD + स्तरहरू घट्छन्।
एक इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा यसको भूमिका प्रदर्शन गर्न, NAD फिर्ता र पछाडि दुई रूपहरू NAD + र NADH बीचमा फर्काउँछ। NAD + ले खाद्य अणुहरूबाट इलेक्ट्रनहरू स्वीकार गर्दछ, यसलाई NADH मा रूपान्तरण गर्दै। NADH ले इलेक्ट्रोनलाई अक्सिजनमा दान गर्दछ, यसलाई NAD + मा परिवर्तन गर्दै।
NMN NR भन्दा मात्र ठुलो हुन्छ, यसको मतलब सेलमा फिट हुनको लागि प्राय: यसलाई तोडिनु पर्छ। एनआर, जब अन्य एनएडी + पूर्ववर्तीहरू (निकोोटिनिक एसिड वा निकोटीनामाइड जस्तै) को तुलनामा दक्षतामा सर्वोच्च शासन गर्दछ। ... एनआर, यद्यपि, माउस मोडेलको कलेजो, मांसपेशी, र मस्तिष्क टिशूमा कोषहरू प्रविष्ट गर्न देखाइएको छ।
मादक पेय पदार्थहरूलाई काट्नुहोस्
भिटामिन बी two का दुई रूपहरू छन्। एउटा फारम नियासिन हो, अर्को नियासिनमाइड हो। नायासिनामेड खमीर, मासु, माछा, दूध, अण्डाहरू, हरी तरकारी, सिमी, र अन्नको अन्न सहित धेरै खाद्य पदार्थ मा पाइन्छ। Niacinamide अन्य भिटामिन बी को साथ धेरै भिटामिन बी जटिल पूरकहरूमा पनि पाइन्छ।
औषधिको रूपमा प्रयोग गरिएको निकोटीनामाइडले छालालाई बिभिन्न तरीकाले फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। निकोटीनामाइडमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू छन्, जुन बुलस (छाला) रोगहरूको उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले एक्ने-इन्फ्लेमेन्टरी कार्यद्वारा र सेबम कम गरेर एक्ने सुधार गर्न सक्छ।
अनलाइन प्रशंसापत्र अनुसार, नियासिन थेरापीमा प्रतिक्रिया गर्ने गम्भीर उदासीनता भएका व्यक्तिहरूले कतै १,००० देखि .,००० मिलीग्रामदेखि धेरै बढी डोजबाट फाइदा लिन सक्छन। २०० nutrition को पोषण डकुमेन्टरी, फूड मैटर्सका अनुसार एउटी महिलाले उनको डिप्रेसन लक्षण ११,,०० मिलीग्राम दैनिक खुराकको साथमा देखी।
भिटामिन बी defic को अभावका लक्षणहरूमा थकान, अपच, मतली, बान्ता, पखाला, मुखको घाव, एक फुलिएको उज्यालो रातो जिब्रो, कमजोर रक्तचक्र, र उदास मुड समावेश छ। क्र्याक स्केली छाला जुन घाममा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ भिटामिन बी defic को अभावको अर्को लक्षण हो।
दुबैका लागि, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनको माध्यमबाट एटीपी उत्पादन बढाउन NAD लाई tricarboxylic एसिड चक्रमा NADH घटाउनु आवश्यक छ। वास्तवमा, दुबै NAD को स्तर र मांसपेशिहरुमा NAD उद्धार एन्जाइम को अभिव्यक्ति व्यायामको दौरान वृद्धि देखाइएको थियो।
निकोटीनामाइड, नियासिनमाइड पनि भनिन्छ, नियासिन वा भिटामिन बी of को पानीमा घुलनशील एमाइड रूप हो। यो माछा, कुखुरा, अण्डा, र अनाज अनाज जस्ता खाना मा पाइन्छ। यो पनि एक पूरक पूरक को रूप मा मार्केटिंग, र niacin को एक गैर-फ्लशिंग रूप को रूप मा छ।
रिपोर्ट गर्नुहोस् कि नियासिन, भिटामिन बी, माइटोकन्ड्रियल मायोपाथी बिरामीहरूको मांसपेशी र रगतमा एनएडी + स्तरको दक्षताका साथ उद्धार गर्न सक्छ, रोग स and्केत र मांसपेशीहरूको शक्ति सुधार। NAD + स्तरहरू स्वस्थ विषयहरूमा पनि बढ्यो। प्रमाणले सुझाव दिन्छ कि नियासिन मानिसहरु मा एक प्रभावी NAD + बूस्टर हो।
एक NAD + को बढ़ावा को लागी, NADH5मिलीग्राम sublingual ट्याबलेट लिनुहोस्। जेट ल्याग रोकथाम गर्न, NADH २० मिलीग्राम लिनुहोस्। इष्टतम NAD + स्तरसम्म पुग्न IV Nic-Nicotinamide adenine dinucleotide infusion साप्ताहिक वा मासिक पाउनुहोस्।
यी "पाप" ले सात घातक अवस्थालाई योगदान पुर्‍याउँछ जुन बुढेसकालको साथ (मोटापा, टाइप २ डायडायटिस, हृदय रोग, क्यान्सर, डिमेन्शिया, गठिया, र अस्थिसमशोथ) बढ्दै जान्छ। Sirtuins NAD + - निर्भर डिसेटाइलासको वर्ग हो जसमा मानव र अन्य स्तनपायीका सात सदस्य हुन्छन्।
यस्ता रोगहरूलाई रोकथाम गर्न वा लड्ने रणनीतिहरूमध्ये एक व्यायाम हो। व्यायामले सकारात्मक गतिविधिको गतिविधि र / वा sirtuins को अभिव्यक्तिलाई प्रभाव पार्छ, परिणामस्वरूप राम्रो ऑक्सीडेटिव मेटाबोलिज्म दक्षता, बढ्दो बायोजेनेसिस र माइटोकन्ड्रियल फंक्शन, साथ साथै एन्टिऑक्सिडन्ट प्रणालीको मर्मतसम्भार गर्दछ।
क्याप्सूल या त १-महिना,--महिना, वा--महिना वृद्धिमा किन्न सकिन्छ। कम्पनीले उपभोक्तालाई १ mg० मिलीग्राम क्याप्सूल दिनको दुई दिन खान वा नलिन सिफारिश गर्दछ। क्याप्सूल या त बिहान वा राती लिन सकिन्छ र खाना सहित वा बिना।
ChromaDex द्वारा अनुदान प्राप्त क्लिनिकल अध्ययनहरूले देखाए कि NR ले सुरक्षा र प्रभावी ढंगले रगत प्रवाहमा व्यक्तिहरूको NAD 6--8 हप्ता पछि बढाउँदछ। ट्रु नाएजेनले विशेष रूपमा दावी गरेको छ कि आठ हप्ता सम्मको पूरकको 300०० मिलीग्राम लिने व्यक्तिले AD०-40०% ले एनएडी बढाए।
Tru Niagen सिफारिश गरीएको छ प्रत्येक दिन एकै समयमा। तपाईं यसलाई एक पटक बिहान वा रातमा, खाना बिना वा बिना लिन सक्नुहुन्छ।
ट्रु नाइजेनमा निकोटिनमाइड राइबोसाइड हुन्छ जुन मल्टिभिटमिन उत्पादनहरूमा पाइने भिटामिन बी sources स्रोतहरूको रूपमा मिल्दैन। ट्रायू नाइजेन कोषहरू द्वारा अवशोषित हुन्छन् र भिटामिन बी ((नियासिन, निकोटिनमाइड) भिटामिन पूरकहरूमा पाइने भिन्न अद्वितीय मार्ग प्रयोग गरेर दक्ष रूपमा NAD मा रूपान्तरण गरिन्छ।
नियासिनको विपरीत, नियासिनमाइड फ्लशिंगको कारण गर्दैन। जे होस्, नियासिनमाइडले सानो पेट प्रतिकूल असरहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै पेटको पेट, आन्द्राको ग्याँस, चक्कर, चकत्ते, खुजली र अन्य समस्याहरू। छालामा लागू गर्दा, नियासिनमाइड क्रीमले हल्का जलन, खुजली, वा रातोपन निम्त्याउन सक्छ।
मिक्स नगर्नुहोस्: नायासिनामाइड र भिटामिन सी। यद्यपि तिनीहरू दुबै एन्टीआक्सीडन्टहरू हुन्, भिटामिन सी एक अवयव हो जुन नियासिनमाइडसँग उपयुक्त छैन। डा। मार्चबेन भन्छन्, "दुबै स्किनकेयर उत्पादनहरूमा बिभिन्न सामान्य एन्टिआक्सिडन्टहरू प्रयोग गरिन्छन्, तर तिनीहरू एक पछि अर्को प्रयोग गरिनु हुँदैन।"
जब उच्च सान्द्रतामा प्रयोग गरिन्छ, नियासिनमाइड छालामा जलन र रातोपन निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईं अशुभ अल्पसंख्यकको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ जसले नियासिनमाइडको साथ उत्पादनप्रति नराम्रो प्रतिक्रिया देखाएमा, त्यहाँ तीन प्राथमिक सम्भाव्यताहरू छन्: तपाईलाई एलर्जिक छ, त्यहाँ अर्को किसिमका चिडचिड उत्पन्न हुन्छ, वा तपाई धेरै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
यी साइड इफेक्टको जोखिम कम गर्न, वयस्कहरूले प्रति दिन mg mg मिलीग्राम भन्दा बढीको मात्रामा नियासिनमाइड लिनबाट जोगिनु पर्छ। जब नियासिनमाइडको प्रति दिन grams ग्राम भन्दा अधिक खुराक लिइन्छ, अधिक गम्भीर साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ। यसमा कलेजोको समस्या वा उच्च रगतमा चिनी समावेश छ।
हालसम्म गरिएको पाँचवटा अध्ययनले निकोटीनामाइड राइबोसाइड मानव प्रयोगको लागि सुरक्षित रहेको देखाएको छ। यद्यपि, यी अध्ययनहरूले प्रति दिन १,००० देखि २,००० मिलीग्राम बीचका लागि सुरक्षित निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोरेडिडसेज सीमा स्थापना गरेका छन्। यद्यपि यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि निकोटीनामाइड रिबोसाइडको सुरक्षाको विश्लेषण गर्ने सबै अध्ययनहरूको नमूना आकार एकदम सानो थियो र यसैले यस क्षेत्रमा अझ बढी अनुसन्धान आवश्यक छ।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको प्राथमिक उद्देश्य शरीरलाई निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड वा निआगेन प्रदान गर्नु हो। नाइजेन वा एनआर सामान्यतया दुई रूपहरूमा उपलब्ध हुन्छ: ट्याब्लेटहरू र क्याप्सुलहरू। धेरै निकोटिनमाइड राइबोसाइड पूरक उत्पादकहरूले भेला गर्छन् NR अन्य रसायनहरूको साथ, जस्तै Pterostilbene। जे भए पनि, सुरक्षित हुन, प्राय जसो पूरक उत्पादकहरूले दिन प्रति दिन २ 250० देखि mg०० मिलिग्राम बीच एनआरको दैनिक सेवन राख्न सल्लाह दिन्छन्।
① निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड स्वस्थ बुढेसकाल लाई बढावा दिन्छ
शरीर भित्र निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड द्वारा सक्रिय NAD + स्वस्थ बुढेसकाल संग सम्बन्धित विशिष्ट इन्जाइमहरू सक्रिय गर्दछ। त्यस्तै एक इन्जाइम sirtuins हो, जुन समग्र सुधारिएको जीवन र जनावरहरूको जीवनकालको साथ जोडिएको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेको छ कि sirtuins ले जीवनको गुणस्तर र दीर्घायु सुधार गरी सूजन कम गर्दछ, क्यालोरी प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित फाइदाहरू बढाउँदछ र बिग्रिएको डीएनए मर्मत गर्दछ। एनएडी + निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड द्वारा सक्रिय पनि पोली पोलीमेरेसहरू सक्रिय गर्दछ जुन बिग्रिएको डीएनए मर्मतको लागि परिचित छ। यसबाहेक, धेरै वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पोलीमेरेसको क्रियाकलापलाई बृद्धि भएको आयुसंग जोडेको छ।
② यसले हृदय रोगहरूको विकासको सम्भावनालाई कम गर्दछ
बुढ्यौलीले पनि हृदय रोगहरूको सम्भावना बढाउँछ। उमेर ढल्कँदै जाँदा, उनीहरूको रक्त नलीहरू मोटो र कठोर हुन्छन् जसले फलस्वरूप रक्तचाप बढाउँदछ। जब वाहकहरूमा रक्तचाप बढ्छ, रगत पम्प गर्नको लागि मुटुले दुई गुणा कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ, जसले विभिन्न हृदय रोगहरू निम्त्याउँछ। निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड द्वारा प्रदान गरिएको NAD + रक्त वाहिकामा हुने उमेरसँग सम्बन्धित परिवर्तनहरूलाई उलट गर्दछ। निकोटिनमाइड एडेनिन डिन्युक्लियोटाइड वा एनएडी + ले रक्त वाहिका कठोरतालाई मात्र कम गर्दैन तर सिस्टोलिक रक्तचाप पनि नियमित गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्न पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन्।
③ निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडले मस्तिष्क कोषहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ
निकोटीनामाइड राइबोसाइडले मस्तिष्क कोषहरूलाई बचाउँछ। चूहोंमा गरिएको एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि एनएडीको एनआर प्रेरित प्रेरित उत्पादनले पीजीसी -१ अल्फा प्रोटीनको उत्पादन 1०% सम्म बढायो। PGC-50 अल्फा प्रोटीन मस्तिष्क कोशिकालाई ऑक्सीडेटिव तनावबाट बचाउन मद्दत गर्दछ र mitochondrial प्रकार्य सुधार गर्दछ। यसैले, मानवमा एनआरको सेवनले उमेर प्रेरित मस्तिष्क रोगहरू जस्तै अल्जाइमर र पार्किन्सन जस्ता सुरक्षा गर्दछ। एउटा विशेष अनुसन्धान अध्ययनले पार्किन्सनबाट पीडित व्यक्तिहरूमा एनएडी + स्तरको प्रभावको अध्ययन गर्‍यो। अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्यो कि एनएडी + स्टेम सेलहरूमा माइटोकोन्ड्रियल फंक्शनमा सुधार आएको छ।
④ निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडका अन्य मुख्य लाभहरू
माथि छलफल गरिएका सुविधाहरू बाहेक, यहाँ निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइडसँग सम्बन्धित केही थप थप फाइदाहरू छन्।
एनआर मांसपेशीहरूको शक्ति, प्रकार्य र सहनशीलता बढाउन परिचित छ र यसैले, NR खपत राम्रो खेलकुद प्रदर्शन संग जोडिएको छ।
माथि छलफल गरेझैं NAD को NAD को प्रेरित उत्पादनले क्षतिग्रस्त डीएनए मर्मत गर्दछ र अक्सिडेटिभ तनावबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसले बारीमा कसैको क्यान्सर हुने सम्भावनालाई कम गर्दछ।
एउटा अध्ययनले चूहोंमा मेटाबोलिज्ममा निकोटीनामाइड रिबोसाइडको प्रभाव विश्लेषण गर्छ। अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्यो कि एनआरले चूहोंमा मेटाबोलिज्म बढायो। यद्यपि यस सम्बन्धमा अझ बढी वैज्ञानिक प्रमाणको आवश्यकता छ, धेरै वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि निकोटीनामाइड राइबोसाइडले मानवमा यस्तै प्रभाव पार्दछ र तसर्थ, वजन घटाउन सहयोगी हुनुपर्दछ।
विगत केही वर्षहरुमा निकोटिनमाइड राइबोसाइड सप्लीमेन्टहरुको माग बढेको छ, मुख्य कारण निकोटीनामाइड राइबोसाइडका धेरै फाइदाहरु छन्। यदि तपाईं निकोटीनामाइड रिबोसाइड सप्लीमेन्ट बजारमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा भनेको आफैलाई विश्वासयोग्य र भरपर्दो कच्चा माल आपूर्तिकर्ता भेट्टाउनु हो। कहाँतिर निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर किन्नुहोस् थोक मा? उत्तर कोफ्टेक हो।
Cofttek एक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता हो जुन २०० 2008 मा अस्तित्वमा आएको थियो र करिब एक दशकमा कम्पनीले धेरै देशहरूमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरेको छ। भरपर्दो उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने बाहेक कम्पनी बायोटेक्नोलजी, रासायनिक टेक्नोलोजी र रासायनिक परीक्षणको क्षेत्रमा प्रगति गर्न पनि केन्द्रित छ। कम्पनी गुणस्तरीय अनुसन्धानका लागि प्रतिबद्ध पनि छ, जसले यसलाई बजारमा अन्य आपूर्तिकर्ताको तुलनामा बढ़त दिन्छ। कम्पनीले उपलब्ध गराएको निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर २ k किलोग्रामको ब्याचमा आउँछ र गुणस्तरको लागि विश्वास गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, कम्पनीसँग उत्कृष्ट बिक्री र ग्राहक समर्थन टीम छ जसले वास्तविक समयमा तपाईंको सबै आवश्यकताहरू र जिज्ञासाहरूको ख्याल राख्छ। यो, यदि तपाई थोरैमा निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर किन्न चाहानुहुन्छ भने कृपया Cofttek लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
(1)।कोन्जे, डि।, ब्रेनर, सी। र क्रुगर, सीएल सेफ्टी एण्ड मेटाबोलिज्म दीर्घकालीन अवधिको प्रशासन NIAGEN (निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड) एक अनियमित, डबल-ब्लाइन्ड, प्लेसबो-नियन्त्रित क्लिनिकल परीक्षण स्वस्थ अधिक वजनको बारे। Sci Rep,,99772 2019२ (२०१))
(2)।कार्लिजन एमई रिमिले, के एचएम रउम्स, मिचिएल पीबी मूनन, निल्स जे कोनेल, बास हवेक्स, जूलियन मेभेन्काम्प, लुकास लिन्डेबूम, भेरा एचडब्ल्यू डी विट, टिनेके भान डी वेइजर, सुजान एबीएम आर्ट्स, एस्थर लुत्जेन्स, बाउक भि स्मोकर्स, ह्युंग लल्फिक रुबान जापाटा-पेरेज, रेकल्ट एच हौटकोपर, जोहान अउवरेक्स, जोरीस होक्स, भेरा बी श्राउवेन-हिन्डरलि,, एस्थर फिलिक्स, पैट्रिक श्राउवेन, निकोटिनमाइड राइबोसाइड पूरक शरीर संरचना र स्केटल मांसपेशियों एसेटिलकार्नेटाइन मानव शरीरको संयोजनमा स्वास्थ्य परिवर्तन गर्दछ। क्लिनिकल पोषण को अमेरिकन जर्नल, खण्ड ११२, अंक २, अगस्त २०२०, पृष्ठ –१–-–२112।
()) .एलहासन, वाईएस, क्लोकोवा, के।, फ्लेचर, आरएस, स्मिट, एमएस, गार्टेन, ए, डोइग, सीएल, कार्टराइट, डीएम, ओके, एल।, बर्ली, सीभी, जेन्किन्सन, एन।, विल्सन, एम।, लुकास, एस, अकरमान, आई।, समुद्रीत, ए, लाइ, वाईसी, टेनिन्ट, डीए, नाइटिंगेल, पी।, वालिस, जीए, मनोलोपलोस, केएन, ब्रेनर, सी। ... लाभ्री, जीजी (२०१ 3) )। निकोटिनमाइड राइबोसाइड एजग्स ह्यूमन स्केलेटल स्नायु एनएडी + मेटाबोलम र ट्रान्सक्रिप्टोमिक एन्टी-इन्फ्लेमेटरी हस्ताक्षरहरू प्रेरित गर्दछ। सेल रिपोर्टहरू, 28()), १–१–-१–२7.e1717।
(4)।निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर
म भर्खरको ड्रग्सको बारेमा बढि ढिलो उमेरको लागि मात्र सिक्दै छु, मैले अहिलेसम्म सिकेका चीजहरू १ हुन्। निकोटिनमाइड राइबोसाइड - NAD स्तर २ को लागि। यकिन छैन यो उमेर ढिलो भए पनि, तर व्यक्तिहरू यी प्रयोग गर्दैछन्।
मेरो छालाको सम्बन्धमा, एनआर पूरकले यसमा कम सुख्खा हुने खतरा बनाएको छ, विशेष गरी जाडोको समयमा मेरा खुट्टा।
NAD + पानीमा गिरावट हुन्छ र यो कोठाको तापमान भन्दा बढि पनी अवधिको कुनै लम्बाइको लागि जान्छ।
यो तपाइँलाई पुग्ने बित्तिकै यो शून्यमा गिरावट आएको छ किन कि हामी NR र NMN जस्तै अग्रगामीहरू लिन्छौं र ती दुबै वैध NAD + बूस्टरहरू हुन्।
तपाईं जसको लागि जाने निर्णय गर्नुहुन्छ, १ जी बाट सुरू नगर्नुहोस्। कम डोजबाट सुरू गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कसरी तपाईं।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड आफै पनि धेरै स्थिर छैन।
यो तपाइँलाई पुग्ने बखत यो सम्भवतः NAM मा गिरावट आउँछ।
यद्यपि तपाईले किन्न सक्नुहुने प्रायः सबै सामग्रीहरू एनआर क्लोराइड हुन्, जुन कि यो भिज्ने छैन जबसम्म धेरै स्थिर हुन्छ (सिन्क्लेयरले भनेका बावजुद यो डाटाको साथ प्रमाणित हुन सक्छ)। एनआर क्लोराइड को क्लोराइड हिस्सा मूलतः एक स्टेबलाइजर हो र NR क्लोराइड एक तरल (आफ्नो पेट जस्तै) मा हिर्काउने बित्तिकै क्लोराइड भाग टुक्रिन्छ र NR छोडिन्छ।
NR NMN का अग्रदूत हो, NMN NAD का अग्रदूत हो।
यो पूरै एनआर एनम्प्ट एनएमएन नाद स्र्ट १ ब्वाँसो मलाई एक किसिमको भ्रमपूर्ण छ तर के म भेला गर्न सक्छु, एनआर फ्याक्ट सेल र बीटा आइसलेट सेलहरू एनएमएन मा nampt द्वारा रूपान्तरण गरिन्छ, जुन अर्को एन्जाइमले नाड + मा परिवर्तन गर्दछ, र nad + sirt1 को साथ अन्तर्क्रिया गर्दछ। इन्सुलिन को स्राव हुन।
इन्सुलिन एक वृद्धि कारक हो र यसले कोषहरूमा चिनी पनि ल्याउँछ, जसले ऊर्जालाई बढावा दिन्छ।
नाइगेन एनआर-सीएल हो, जुन स्थिर छ, लामो शेल्फ-लाइफ छ, र फ्रिज गर्न आवश्यक पर्दैन। मलाई लाग्दैन कि कोहीले शुद्ध एनआर बेच्छ।
१० हप्ताको पूरक एनआर लाई राम्रोसँग सहन गरिएको थियो र एमसीआईको साथ वयस्कहरूको रगतमा एनएडी (+) र सम्बन्धित मेटाबोलिटहरू उल्लेखनीय रूपमा बढाइयो। एनआरले क्रमशः हाम्रा प्राथमिक र माध्यमिक परिणामका उपायहरू, एफएमआरआई र शारीरिक समारोह सुधार गर्‍यो। यद्यपि यस सानो चालक अध्ययनमा अनुभूतिमा भिन्नताहरू प्राप्त गर्न सकिएन। हाम्रो परिणामहरूले MCI भएको वृद्ध वयस्कहरूमा मस्तिष्क संरचना र कार्य कायम राख्न विधिको रूपमा NR को थप परीक्षणको लागि सहयोगी प्रमाणहरू प्रदान गर्दछ।
मैले पूरै नयाँ र प्रि -डिडींग टेक्नोलोजीहरूको समानता सम्बन्धी पूरै पोस्ट पढें, यो उल्लेखनीय लेख हो।
म २ 26 वर्ष मात्र हुँ र एनआर / एनएडी + शुरू गरे पछि म २ 25 वर्षको भएँ, मसँग १ the वर्षको उमेरमा मैले गरेको उर्जा छ र म पनि त्यो उमेरलाई फेरि महसुस गर्दछु, मेरो कसरतको दुखाइ पनि धेरै छिटो निको हुन्छ।
यसले निश्चित रूपमा केहि गर्दछ र मेरो धीरज नजिक छ त्यसैले यसले काम गरिरहेको हुनुपर्दछ।